Diyaaradaha Maraykanka oo Xoolo dhaqato ku laayay deegaan hoosyimaada Qoryoolay. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Diyaaradaha Maraykanka oo Xoolo dhaqato ku laayay deegaan hoosyimaada Qoryoolay.
On Dec 6, 2017 237 0
Waxaa goordhow diyaaradaha Maraykanka si ula kac ah u duqeeyeen deegaan hoosyimaada magaalada Qoryooley ee gobolka Shabeellaha hoose.
Diyaarad drone ah ayaa dhowr gantaal waxay la dhacday xoolo dhaqato shacab ah oo ku sugnaa duleedka deegaanka Farsooley oo kamid ah deegaannada hoos yimaada magaalada Qoryoolay ee gobolka Shabeellaha hoose.
Ugu yaraan 7 Ruux ayaa geeriyootay, halka 3 kalena ay dhaawacyo soo gaareen, sida ay inoo sheegeen dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta Islaamiga ee Al-Furqaan.
Diyaaradaha Maraykanka ayaa si ula kac ah waxay u duqeeyeen dadkan oo ay banaanka tiilay iney ahaayeen xoolo dhaqato masaakiin ah, waxaana halkaas ku kala yaacay xoolihii ay dadkan ay dhaqanayeen oo qudhooda ay macquul tahay iney wax soo gaareen.
Maraykanka ayaa tan iyo markii uu taladiisa la wareegay cunsuriga Donald Trump wuxuu sii laba jibaaray beegsashada dadka muslimiinta soomaaliyeed, isagoona horay ugu hanjabay inaanu kala saari doonin Shacab iyo ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab, uuna koonfurta Soomaaliya u aqoonsaday goob dagaal.
Dhawaan ayay ahayd markii diyaaradaha Maraykanka duqeyn ay ka geysteen deegaanka Daaru-Salaam ay ku dileen dhowr ruux oo beeralay ahaa, waxaana Maraykanku mar welibo oo dad shacab ah uu laayo sheegtaa inuu dilay ciidamo katirsan Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab.